Olee otú ikpe ma ụgbọ ala taya bụ enweghị ikuku-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Etu esi ekpebi ma taya ụgbọ ala bụ enweghị ikuku
Oge: 2021-05-17 Hits: 36
Dị ka okwu ochie si kwuo, njem nke otu puku kilomita na-amalite site na otu nzọụkwụ.Anyị niile maara na taya bụ ọnọdụ dị mkpa maka ịnya ụgbọ ala nkịtị. Maka njem ọ bụla adịghị mma, ka anyị ghọta ihe ọmụma banyere taya taya ọnụ.
Nsogbu Taya bụ ezigbo ihe dị mkpa maka nchekwa nke ụgbọala.Ndị nwe ụgbọ ala kwesịrị ịdị na-enyocha nrụgide taya mgbe ha na-anya ụgbọ ala ha.
Ugboro ole ka taya ụgbọ ala na-ebuwanye ibu?
Ogologo oge ole ka taya ụgbọ ala na-akwụ ụgwọ? Nke a abụchaghị eziokwu. Dịka usoro ọrụ nkịtị si dị, a ga-enyocha nrụgide taya otu ugboro kwa ọnwa abụọ, ọ ga-ekwenyekwa na taya ụgbọ ala ahụ dị mma tupu draịva ọ bụla.Ugbu a, ụgbọ ala ahụ, nrụgide taya nwere ọnụọgụ akọwapụtara nke ọma, nke a na-etinye na mkpuchi mmanụ ụgbọ ala ma ọ bụ oghere ụzọ ndị njem. Dịka ọmụmaatụ, nrụgide taya bụ 2.3bar, onye nwe ya kwesịrị ịgba mbọ hụ na nrụgide taya nke ụgbọ ala ahụ dị n'etiti ± 0.2bar, 2.1bar ~ 2.5bar, ọnọdụ dị otú a dịtụ nkịtị.Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe onye nwe ya iji kwụọ ikuku ahụ? Ọ dị mkpa ka atụle ya dịka nrụgide taya nke ụgbọ ya si dị.
Etu esi ekpe ikpe ma taya ahụ bụ enweghị ikuku?
Maka ụgbọ ala ọhụrụ ahụ, nlekota nrụgide taya abụghị nhazi a na-adịghị ahụkebe, ị nwere ike site na nlekota nrụgide taya n'oge ọ bụla iji chọpụta nrụgide taya ahụ, nke a bụ nke kachasị ezi, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, nwere ike ịzụta barometer, akụ bụ ihe ọtụtụ yuan , maka ugboro ugboro enyi nke ogologo njem, ọ dị irè, ihe kachasị mkpa bụ ịlele taya maka nchekwa.
Taya mgbali dị oke ala oriri mmanụ ga-ebili, na ụgbọ ala na-ebuli elu ike ala, ụzọ mmetụta adịghị mma.Ọ bụrụ na nrụgide taya dị oke elu, nkasi obi na-ebelata, oriri mmanụ na-ebelata, mbido na ntụgharị na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ, mmetụta okporo ụzọ doro anya, mana arụmọrụ braking na-emetụta ntakịrị.Ọ na-abụkarị naanị anyị ga-edozi nrụgide taya dịka nsonaazụ mmụba.Kpachara anya ka ị ghara ichefu taya ụlọ ọrụ gị oge ọ bụla ị tụlere nsogbu taya ahụ.
Gini mere eji anwale ike ike ike
N’ezie, ọ bụrụ na nrụgide taya pere mpe, oriri mmanụ ga-aba ụba, ike ụgbọ ala ga-ebelata, ọ gaghị adịkwa mma ịnya ụgbọ.Ọ bụrụ na nrụgide taya dị oke elu, nkasi obi na-ebelata, ọ bụ ezie na ọkụ ọkụ na-ebelata, mmalite na ntụgharị nzaghachi bụ ngwa ngwa, okporo ụzọ na-enwe mmetụta doro anya, mana arụmọrụ braking na-emetụta ntakịrị.
Ọ na-abụkarị iji ụgbọala eme ihe, ọ ga-eme ka ọ ghara ịgbaji. Mgbe ụgbọ ala na-adọba ụgbọala ruo ogologo oge, ọsọ nke taya ga-abawanye.Nke a bụ n'ihi na mgbe a dọwara, taya na ehiwe nke ike ebe a na-edozikwa ya otu ebe, ka oge na-aga, a ga-agbanwe ya, na-eme ka mkpọpu ikuku adịghị mma.N'aka nke ọzọ, taya na-agba agba n'ihi na ike ahụ dị otu, ikuku dị n'ime ya na-agbasawanye, ya mere ọ bara uru ịdebe.Ya mere, mgbe ụgbọ ala gị jiri ugboro ole pere mpe, a na-atụ aro ka ị belata usoro elele nrụgide taya.
Previous: Igwe na-adịghị ala ngwa ngwa, ma ọ bụ ihe yiri ya
Ọzọ: Obi ụtọ Ramadan